Homeबिबिधकर्णालीमा जल, रेल र रज्जु मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, प्रतिव्यक्ति आय ११४७ डलर
६ चैत, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले बिहीबार प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७-०८०/८१) सार्वजानिक गरेको छ ।
पञ्चवर्षीय योजनामार्फत विभिन्न २० सूचकको दीर्घकालीन लक्ष्यसमेत सार्वजनिक गरिएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ लाई आधार वर्ष मानेर प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तयार पारेको जनाएको छ ।
वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ३ अंकको बनाउने र, अहिले ५१.२ प्रतिशत रहेको प्रदेशको बहुआयामिक गरिबीलाई २५ प्रतिशतमा झार्ने सरकारको लक्ष्य निर्धारण गरिएको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्र शाहीले बताए ।
प्रदेशको लक्ष्य र समृद्धि प्राप्तिका निम्ति पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, मानव संशाधन र सुशासनमा लगानीको प्राथमिकताको क्षेत्र सरकारले तोकेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्ति गर्न र, १४.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका गर्न २७ हजार ९८२ करोड पुँजी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै वन तथा जैविक विविधतामा ७ अर्ब ८३ करोड, जडीबुटीमा २ अर्ब ९५ करोड, खानी तथा खनिज सम्पदामा १ अर्ब ३ करोड, उद्योग ८ अर्व, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा ३ अर्ब ६७ करोड, पर्यटनमा ९ अर्ब १० करोड र निजी क्षेत्रमा १ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको प्रदेश योजना आयोगका अर्को सदस्य डा. दिपेन्द्र रोकायाले बताए ।
अहिले ८.२५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको कर्णालीमा आगामी ५ वर्षभित्र २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिइएको छ । हाल ६७.५ प्रतिशत परिवार विद्युतको पहुँचमा रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा ९० प्रतिशत परिवारमा बिजुली पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रदेश योजना योजना आयोगले पञ्चवर्षीय योजनासँगै ‘कर्णाली सोच-२१००’ पनि तयार पारेको छ । २५ वर्षलाई ३ चरणमा कार्यविभाजन गरी विकासका मोडल बनाइएको आयोगका सदस्य डा. दीपेन्ऽ रोकायाले बताए ।
हाल औसतमा साक्षरता दर ६६ प्रतिशत छ भने १५-२४ वर्ष समूहका युवाहरुको साक्षरता दर ८२ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै आधारभूत तहमा भर्ना दर ९८ प्रतिशत, माध्यमिक तहमा ६५ प्रतिशत, उच्च शिक्षामा १९ प्रतिशत खुद भर्नादर पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्ममा बेरोजगारी दर ९.७ बाट ६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पनि प्रदेश योजना आयोगको छ ।
विकासलाई सबैको साझा एजेण्डा बनाऔं : मुख्यमन्त्री शाही